Pentekoty: fety nieren-doza tamin’ity taona ity | NewsMada
Pentekoty: fety nieren-doza tamin’ity taona ity
Nieren-doza ny fetin’ny Pentekoty tamin’ity taona ity. Tsy nisy ny maty, tsy nisy koa ireo voapoazina ara-tsakafo. Ary vitsy ireo niditra hopitaly raha oharina tamin’ny taon-dasa. Raha ny omaly, alatsinain’ny Pentekoty fotsiny hatramin’ny 4 ora hariva, niisa 18 ireo niditra ny sampana vonjitaitra ao amin’ny hopitalin’Ampefiloha ary roa tamin’izy ireo no voatazona harahi-maso. Nambaran’ny tompon’andraikitra tamin’izany fa niisa telo ireo naratra vokatry ny « accident à responsabilité civile ». Telo ihany koa ireo niditra ny hopitaly taorian’ny lozam-pifamoivoizana. Tsy nisy ireo naratra vokatry ny asa nataony. Olona iray kosa no naratra teny an-dalambe ary enina ireo niditra hopitaly taorian’ny aretina nahazo azy.
Tao amin’ny sampana fameloman’aina kosa, hatramin’ny 4 ora hariva, olona roa no noraisin’ireo mpitsabo, ary ny iray amin’izy ireo narary vokatry ny fahatapahana lalandra. Vokatry ny hamamoana diso tafahoatra kosa ny iray.
Raha tamin’ny fetin’ny pentekoty kosa, nahatratra 89 ireo olona niditra tao amin’ny sampana vonjitaitra. 19 ireo notazomina hanaraka fitsaboana. Fantatra tamin’ny fanadihadiana fa miisa 24 ireo naratra vokatry ny « accident à responsabilité civile ». 29 kosa ireo naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana. 16 ny isan’ireo naratra tany an-tokantranony. Niisa telo ireo naratra voakatry ny asa ary sivy ireo naratra teny an-dalambe. Voalaza tamin’izany fa niisa dimy ireo niditra ny sampana fameloman’aina. Olona iray hafa nikasa hamono tena, olona roa tsy nahatsiaro tena vokatry ny hamamoana diso tafahoatra. Nambaran’ireo mpitsabo tamin’izany fa vitsy ireo namonjy ny HJRA nandritra ny fety.